युवती माथि सामुहिक ब’ला’त्कारपछि कैलालीको क्वारेन्टिनमा के भयो ? (भिडियोमा हेर्नुस्) – Jagaran Nepal
युवती माथि सामुहिक ब’ला’त्कारपछि कैलालीको क्वारेन्टिनमा के भयो ? (भिडियोमा हेर्नुस्)
कैलाली । ‘म एक्लै थिए क्वारेन्टिनमा मसंगै बसेका सबैजना गए । म चार महिना देखि विरामी नै थिए । बिरामी अवस्थामा नै म भारतवाट आएको हो । एक्लै कोठामा बसिरहेको बेलामा उनीहरुले आधा रातमा ढोकामा आएर ढोका खोल्नु भन्दै भने । राति किन ढोका खोल्ने रु तिमीहरु उता जाउ । मलाई सञ्चो छैन । धेरै डिस्टर्व गरीस् भने म प्रहरीलाई खबर गरिदिन्छु भनेर भनेर भनेपनि उनीहरुले मानेनन् ।’
‘पछाडी झ्यालमा आएर स्वयंसेवकले ढोका खोल भनेर भनेको भनिरहे । मैले किन ढोका खोल्ने तिमी उता जाउ भनेर भन्दा मानेनन् ।’ उनले घटना विवरण सुनाउँदै भनेकी छन् । बारम्बार ढोकामा आएर बोलाएपछि किन यस्तो गरेको भनेर सोध्न बाहिर निस्कदा पछाडी हट्दै गएर अर्को ढोका नजिक पुगेपछि आफुलाई तानेर कोठाभित्र लगेर आफुमाथि त्यस्तो ह’र्कत गरेको बताएकी छन् । आफुलाई स्वयंसेवक र स्वास्थ्यकर्मी ३ जनाले करणी गरेको बताएकी छन् ।
आफु स्वास्थ्य परिक्षणका लागि तयार छु, म बालबच्चाको आमा हुँ । मेरो २ बच्चा छन् मेरो बच्चाको कोही सहारा छैन । एक जनाले त्यस्तो हर्कक गर्दैगर्दा अर्का ब्यक्ति आएर भिडियो बनाए । भिडियो बनाएर पैसा मागेको पनि उनले बताएकी छन् । महिलालाई त्यस्तो हर्कत भएपछि कैलालाी स्थित क्वारेन्टिमा स्थानियले बिरोध गरेका छन् ।
भारतवाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकी एक युवतीको सामुहिक करणी भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । कैलालीको क्वारेन्टिनमा बसेकी उक युवतीले आफु सामुहित करणीमा परेको बताएकी छन् । १२ दिन अघि भारतको बैंङ्ग्लोर आएर लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्वर १ स्थित शहीद स्मृति माविको क्वारेन्टिनमा बसेकी युवतीले आफु माथि यस्तो घटना भएको बताएकी हुन् । उनले आफुलाई न्याय दिन माग गरेकी छन् ।
युवतीले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेपछि क्वारेन्टिनमा तुनाव उत्पन्न भएको छ । स्थानियले वडा कार्यालय तो’ड फो’ड गरेका छन् । युवतीले आफुलाई स्वयं सेवक बताउने युवाहरुले नै आफुमाथि यस्तो ह’र्कत गरेको बताएकी छन् । यस्तो घटना लुकाउन खोजेको भन्दै स्थानिय आ’क्रो’शित भएका छन् ।
उनीहरु तो’ड’फो’डमा उत्रिएपछि प्रहरीले ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । ति युवतीले आफुलाई स्वयं सेवक बताउनेहरुले रातीमा आएर ढोकामा आएर बोलाएपछि के काम रहेछ भनेर बाहिर निस्कदा अर्को कोठामा लगेर सामुहित करणी गरेको बताएकी छन् ।
एक जनाले त्यस्तो हर्कत गर्दागर्दै अर्को स्वयं सेवक त्यहाँ आएको र उनीसंग सहयोग माग्दा उल्टै ति अर्का ब्यक्ति पनि आफु माथि जाइलागेको युवतीको आुरोप छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतीक विष्टले घटनावारे जाुहेरी नपरेको भएपनि आफुहरुले अनुसन्धान सुरु गरेको बताएका छन् ।